महामारीको सन्त्रास बाँकी रहेकोले हात धुने पूर्वाधार व्यवस्थित नै राख्न जरूरी - Online Majdoor
महामारीको सन्त्रास बाँकी रहेकोले हात धुने पूर्वाधार व्यवस्थित नै राख्न जरूरी
कोभिड– १९ नाम दिइएको कोरोना महामारीबाट जोगिन सर्वसाधारण नागरिकले हात धुन पाऊन् भनेर एक वर्ष पहिले महानगरपालिका, नगरपालिका र प्रहरीको सक्रियतामा काठमाडौँ उपत्यकाका ठाउँ–ठाउँमा पानी ट्याङ्की राखियो । सर्वसाधारणको भीडभाड हुने चोक र अस्पताल अगाडिका ठाउँमा ठूला ट्याङ्की राख्न विभिन्न सामाजिक र व्यापारिक सङ्घ संस्थाले सहयोग र प्रयोेजन पनि गरे । कोरोना महामारीको सन्त्रास बाँकी नै छ । एकवर्ष पुग्दा नपुग्दै सार्वजनिक स्थानमा राखिएका ट्याङ्कीमा पानी छैन । ट्याङ्कीका धारा हराएका छन्, तर पनि ती ट्याङ्की अलपत्र र बेवारिसे ढङ्गले छाडिएका छन् । अलपत्ररूपमा सडकको छेवैमा राखिएका यी ट्याङ्कीका कारण सवारी आवागमनमा बाधा पुगेको छ । धाराको टुटी नभएका यी ट्याङ्कीलाई यस्तै अलपत्र छाड्ने कि व्यवस्थापन गर्ने ? महामारीको सन्त्रास बाँकी रहेकोले हात धुने पूर्वाधार व्यवस्थित राख्न जरूरी छ । सर्वसाधारणको भलाइका लागि राखिएका यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण किन नगरिएको हो ? यस्तो स्थिति हामी काठमाडौँ उपत्यकाका सबैजसो नगरपालिकाहरूमा देखिरहेका छौँ ।
सातदेखि ८७ वर्षका खेलाडीबीच कसिमला पाँय् र बाघचाल प्रतियोगिता
कीर्तिपुरमा सहिद स्मृति कप व्याडमिन्टन प्री क्वाटर चरणमा